अत्यन्तै दुखद खबर सडकमा गयो ज्यान टिपरको ठ क्करबाट २३ वर्षिय युवकको मृ त्यु! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अत्यन्तै दुखद खबर सडकमा गयो ज्यान टिपरको ठ क्करबाट २३ वर्षिय युवकको मृ त्यु!
admin January 27, 2020 समाचार	0
काभ्रेमा टिप्परको ठ क्करबाट एक युवकको ज्या न गएको छ काभ्रेको पाँचखालबाट धुलिखेल आउँदै गरेको बा८५प ६०२६ नंको मोटरसाइकलमा सवार मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ का अन्दाजी ३२ वर्षका प्रदीप श्रेष्ठको आज दु र्घटनामा मृ त्यु भएको हो । सोही दिशाबाट आइरहेको बा४ख ११४५ नंको टिपरले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पाँचखाल नगरपालिका–५, ३७ किलो भन्ने स्थानमा ठ क्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका थिए ।
घाइते श्रेष्ठको धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृ त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । दुर्घटनामा टाउको र कम्मरका गम्भीर चोट लागी घाइते मोटरसाइकलमा सवार रामेछापको सालु देउराली गाउँपालिका–२ का २८ वर्षीय समर मगरको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले टिपर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
जेठानीले कुरा लगाएपछि साउदीवाट भर्खर आएका श्रीमानले खाना पकाउँदै गरेकी श्रीमतीलाई ज’ला’एर मा’रे काठमाडौं, १२ माघ । सिरहामा एक युवकले खाना पकाउँदै गरेकी श्रीमतीलाई ज’ला’एर ज्यान लिएका छन् । सिरहाको दक्षिणी सीमावर्ती औरही गाउँपालिका ५ मा श्रीमानले खाना पकाउदै गरेकी पत्नीलाई ज’ला’एका हुन् ।
औरही गाउँपालिकाकी २५ वर्षीया अनितादेवी यादवलाई उनकै श्रीमान विनोद यादवले जलाएको प्रहरीले जनाएको छ । अनितालाई ग’म्भिर अवस्थामा उपचारको लागि विराटनगरको एक अस्पतालमा लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उपचारको लागि काठमाडौं ल्याए लगत्तै कीर्तिपुर अस्पतालले उनलाई मृ’त घोषणा गरेको हो । ह’त्या गरेको आ’रोपमा उनका श्रीमान विनोदलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ
पछिल्लो हप्ता साउदी अरबबाट घर फर्किएका विनोदलाई भाउजु चौरासीवतीले अनिताको चरित्रको विषयमा कुरा लगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृ’तक’की एक मात्र छोरा चार वर्षीय ओमशरणलाई दरहैयास्थित मावलीमा ल्याएर राखिएको छ
कालापानी विषय लिएर किन प्रचण्डले यसो भने? सामाजिक सञ्जालमा बहस शुरू!